Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe Semalt - Bloqueio De Anúncios E Como Isso Afeta Seu Negócio
Inamba enkulu yabasebenzisi be-intanethi emhlabeni jikelele futhi bathola isidingo sokufaka abavimbeli be-ad, ukuze uthole okuhlangenwe nakho kokuphequlula kwamahhala. I-Google isenze ngisho nezinyathelo zokuphendula ngalesi sidingo ngokusungula isikhangiso sesikhangiso ezinhlelweni zabo ezintsha zesiphequluli se-Chrome. Lokhu kushukunyiswa kuqhutshwa ukuzwela okungavamile okwabelwana ngabathengi abaningi ekukhangiseni nasekukhangiseni. Ngakho-ke, ngaphezu kokuzama nokubhekana nemibono yezikhangiso ngabathengi, imikhiqizo nayo kufanele ibhekane nomthelela walabo abavimbela izikhangiso abangaba nayo.
U-Igor Gamanenko, i-13 (Semalt uMenenja Wokuphumelela Komthengi, uchaza ukuthi kungani amanye amabhizinisi angazizwa esongelwa yi-block blockers. Lokhu kungenxa yokuthi bashiya isu lezokudayiswa lendabuko bese belifaka ngomqondo omusha owaziwa ngokuthi ukumaketha okungewona uqobo. Ukumaketha okungabonakali kubhekisela ekusetshenzisweni kwamasu okusetshenziselwa imikhiqizo efana ne-Red Bull ne-Starbucks yokwehlisa umkhiqizo wabo empilweni yamakhasimende angakhona. Le ndlela yasungulwa ngemuva kokukhomba ulwazi olusha mayelana nenqubo yokwenza izinqumo zabathengi.
Sekuyisikhathi eside, inqubo yokwenza izinqumo zabathengi ibhekwa njengendlela eqondile ngenkathi eqinisweni, ayikho..Umqondo wendabuko wukuthi ukuqwashisa isidingo ekugcineni kuholela ekuthengeni ngenkathi imodeli engekho emthethweni, iningi labo abangakwazi ukubhekana nayo empilweni yangempela, ikhombisa ukuthi akukho ukulandelana okuholela ekuthengweni komkhiqizo. Abanye abathengi bazothenga umkhiqizo ngisho nangaphambi kokuthi baqaphele, abanye bazobona izimpawu eziningana kuqala ngaphambi kokuthenga, ayikho isakhiwo esinezinketho eziqondile.
Ngakho-ke ukumaketha okungewona uqobo kungasiza kanjani ukudlula abavimbela izikhangiso kanye nabantu abanesimo sengqondo esingalungile ababhekene nezindlela zokuthengisa zendabuko? Ukuqala, ukumaketha okungeyona inkinobho kuyindlela yokwakha esikhundleni sezinchungechunge zamasu. Awuphazamisi okuhlangenwe nakho okuhlangenwe nakho kwabathengi kodwa uvumela ukuba babe abahlanganyeli abakhuthele. Thatha isibonelo somkhiqizo we-Red Bull. Esikhundleni somkhiqizo ozama ukuqinisekisa abathengi ukuthi bathenge imikhiqizo yabo, uzenza uyingxenye yompilo womthengi ngokusebenzisa izenzakalo, ukwesekwa kwezemidlalo, nobunikazi bethimba lezemidlalo. Ngokwenza kanjalo, bangakwazi ukwakha okuhlangenwe nakho mayelana namathemba abo 'kanye nezifiso zabathengi.
I-Swatch ne-Starbucks nayo isebenzise ukumaketha okungekho emthethweni ukuze kudlule ukudayiswa kwendabuko namasu okukhangisa. Isibonelo, kunokuba nje ufake uphawu kwihlangothini lwesakhiwo ukuze mhlawumbe wenze ukuqwashisa, bafaka iwashi abantu abangasebenzisa futhi ngesikhathi esifanayo bahlanganyele kulo mkhiqizo.
Uma usemusha kumqondo wokumaketha okungewona uhlangothi futhi uthemba ukuthi uzowenza, kuphakanyiswe ukukhomba amanye amabhizinisi asewasebenzise kakade futhi afunde kuwo. Okubaluleke kakhulu ukuthi kufanele wazi ukuthi akuyona inkambo yezinketho, yiluhlelo umklamo onquma ukuwamukela ukungena emakethe.
Ukuze uthole olunye ulwazi, ungase uthathe ukubukela le vidiyo https://youtu.be/JiJ905EDk0k ukuze ufunde konke mayelana nokumaketha okungekho emthethweni nokuthi amabhizinisi emhlabeni wonke enza kanjani ukuthi asebenzele wona Source .